गोवध सम्बन्धि कानुन नै नेपाली समाजको यथार्थको उल्टो छ। - फ्री प्रेस नेपाल
- शंकर लिम्बु, कानुन ब्यवसायी तथा मानवअधिकारकर्मी
९ आश्विन २०७६, बिहीबार २२:४५
in बिचार, संविधान
सरकारको निकाय पशु सेवा विभागले ७ असोज २०७६ मा निकालेको प्रेस बिज्ञप्तिले लामो समयदेखि चल्दै आईरहेको बहसलाई केन्द्रमा ल्याईदिएकोछ । उसले स्वच्छ र स्वस्थ मासु प्रवर्धन गर्न निकालेको पोस्टरमा अन्य चौपायसगैं गाईको चित्र पनि पर्न गएपछि माफी मागेर बिज्ञप्ति निकालेको हो । (तल बिज्ञप्ति र पोस्टर हेर्नोस् )
पन्चायतकालदेखि बहुसाँस्कृतिक समाजमा द्धन्द्ध निम्त्याईरहेको ‘गो वध’ सम्बन्धि कानुनले त्यस्तो के ब्यवस्था गरेकोछ, जसले राज्य समेत बेलाबखत तर्सने र झस्कने गरेकोछ । जस्तै: धरानमा १८ मंसीर २०७५ मा गोरु काटेको अभियोगमा दस जना पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा पाँचजना मुस्लिम र पाँचजना नेवार समुदायका थिए । पक्राउपछि सदाझैं देशभरी बहस उठ्यो – ‘आफ्नो संस्कृति वा धर्मकर्म गर्दा नभइनहुने परिकार खाँदा पनि राज्यले किन जहिल्यै अपजसको भागी बनाउँछ रु कानुनको डण्डी लगाएर किन जेलनेल हाल्छ ?‘ पञ्चायतकालदेखि उठ्दै आइरहेको यो बहस अहिले पनि जारी छ ।
चौतर्फी दबावपछि पक्राउ परेकाहरु तीन दिनपछि रिहा भए । समाचारअनुसार रिहा भएकाहरुको स्वागतमा गोरु फेरि काटिएको थियो । ती समाचारमा कति सत्यता छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छदैं छ । तर, यो विषयले सधैं सतहमा ल्याउने बहस चाहिं के हो भने नेपालजस्तो बहुजातीय समाजमा विसं १९१० मा बनाइएको मुलुकी ऐनको आधारमा अहिलेपनि किन दण्ड सजाय दिईन्छ ? यहि बहसको अन्तर्यमा आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप) का सचिव शंकर लिम्बुसंग फ्री प्रेस नेपालका प्रमुख सम्पादक जेवी पुनले धरान प्रकरण लगत्तै कुरा गरेकाथिए ।
– शंकरजी तपाईको हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति आएपछि गोरु काटेको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरु छाडिएका हुन् ?
त्यही विज्ञप्तिले नै उनीहरुलाई छाडियो भन्ने अवस्था छैन । हामीले सो प्रेस विज्ञप्ति मानवधिकार उल्लङ्घन भएको हैसियतमा निकालेको हौं । उनीहरुलाई छाड्न विभिन्न पक्षबाट दवाव परिरहेको थियो । तसर्थ अभियोग लागेकाहरुलाई कानुनी पक्रियाअनुसार सुनसरी जिल्ला अदालतबले प्रतिव्यक्ति ५० हजार धरौटी लिएर छाडेकोछ ।
हामीले चाहिं उहाँहरुलाई धरौटी नलिइ वा कार्वाही नै अगाडि नबढाइ रिहा गरिनुपर्छ भनेका थियौं । यसका विभिन्न कारणहरु मध्ये एउटा कानुनी आधार थियो । अर्को मानवअधिकारको पक्ष थियो । त्यसैगरि राजनीतिक र सामाजिक कारण पनि थियो ।
यी मध्ये म कानुनी कारणमा जान चाहन्छु । रणबहादुर शाहको पालासम्म गाईगोरु वा चौपाया काटेर खानेलाई कानुनी कार्वाही गर्ने चलन थिएन ।
– विसं १९१० को मुलुकी ऐनपछि पनि बर्जित गर्ने कानुनी प्रचलन थिएन र ?
थिएन । राजा महेन्द्रको पालामा ‘एक जाति एक भाषा’ नीतिलाई अगाडि बढाइयो । त्यो करिब करिब अहिले भारतमा मोदीले फैलाईरहेको हिन्दु ‘फन्डामेन्टालिज्म’ अर्थात हिन्दु अतिवाद जस्तै अयिभान थियो । त्यो अभियान राजा महेन्द्रले शक्ति हातमा लिई अधिनायकवादी राज्य चलाउनका लागि थालिएकोथियो ।
त्यो प्रयोजनकोलागि उनले हिन्दु भावनालाई भजाए । एकातर्फ त्यसो गरेभने अर्कोतिर आदिवासी जनजातिसँग भएको स्रोत साधन र शक्ति हत्याउन उनीहरुलाई दमन गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो । हिन्दुत्व र गोबधलाई उनले हतियारको रुपमा प्रयोग गरे ।
गाई गोरु खाने जनजातिहरु अहिलेपनि करिब ३८ प्रतिशत छन् । त्यतिबेला त्यो संख्या ६० प्रतिशत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यत्रो संख्यालाई कानुन बनाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसै गरियो । तर, योभन्दा अघि कतिपय ठाउँहरुमा महेन्द्रराजले प्रयास गर्दा पनि रोक्न सकेको थिएन । यो भन्दाअगाडि रणबहादुर शाहको पालामा मेगाजिन कर ९गाईगोरु खाएवापत तिर्नु पर्ने रकम० लिएर किरातीहरुलाई गोबधको अधिकार दिइएकोथियो ।
अहिले राजतन्त्रसँग जोडेर राजावादीहरुले हिन्दु देशमा किन गाई काटिन्छ रु भन्दै नारा लगाइरहेको अवस्था छ । यो अतिवादी नाराको पछाडिको उदेश्य फेरिपनि राजतन्त्रलाई ब्युँझाउन सकिन्छ कि भन्ने अभिष्ट लुकेकोछ । त्यसैले यो राजनीतिक कुरा पनि भयो ।
अर्को मानअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संस्कृति सबैको बराबर हो, आस्था सबैको बराबर हो । हाम्रो संविधानमा संस्कृतिको आधारमा विभेद गर्न पाइन्न भनेर मौलिक हकको रुपमा हामीले राखेका छौं । त्यस्तै हामीले कसैलाई आस्थाको आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन, पाईंदैन । कसैले गाईलाई पूजा गर्छन्, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । कसैले गाईलाई वा गोरुलाई आहाराको रुपमा प्रयोग गर्छन् । त्यो उसको धार्मिक र सांस्कृतिक आस्था हो । त्यसलाई एउटा धर्म मान्ने आस्थाको आधारमा जबरजस्ति ‘यो मान’ भनेर लाद्न मानवअधिकारले मिल्दैन । संविधान र कानुनले पनि मिल्दैन ।
हिन्दु धर्ममा जस्ले आस्था राख्छन्, उनीहरु पनि फरक फरक छन् । गाई खाने हिन्दु धर्मावलम्बीहरु पनि छन् । इण्डिया जसलाई हिन्दुस्थान पनि भनिन्छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीले नागाल्याण्डमा गरेको भाषण छ जसमा उनले ‘हिन्दुस्थान यस्तो राष्ट्र हो जो एसियामा सबैभन्दा बढी विफ इटर हो र विश्वमा सबैभन्दा ठूलो विफ एक्सपोर्टर कन्ट्री पनि हो ‘ भनि बोलेकाछन् ।
यसले स्पष्ट पार्छ, हिन्दुहरु गाई खाने पनि हुँदारहेछन्, व्यापार गर्ने पनि हुँदारहेछन् । नेपालमा पनि ८० प्रतिशत हिन्दु छन् भनेर तर्क गरिन्छ । जसले यस्तो तर्क गर्छन्, उनीहरुले गैरहिन्दुलाई पनि हिन्दुभित्र पारेको देखिन्छ । जस्तो किरातीहरु, तामाङहरु, लिम्बूहरु, मगरहरुरुलाई पनि हिन्दु भनेर दावी गरिन्छ । जसलाई हिन्दु दावी गरिन्छ, उनीहरुको साँस्कृतिक कर्मकाण्ड गाईगोरुको मासु बिना चल्दैन । रङ्मामाईकोट गाविसमा मगरहरुको थान रहेछ । त्यो थानमा पहिला गोरुलाई ‘सेक्रिफाइस’ गरेर पूजा गरिदोँरहेछ । पछिल्लो समयमा अहिले त्यसो गर्न नदिएकोले गोरुको भुत्ला डढाएर पूजा गर्नु पर्ने स्थिति रहेको छ ।
जसले नेपाली जनसंख्यालाई ८० प्रतिशत हिन्दु भनेर दावी गरिरहेकाछन्, त्यहाँ भित्रका केहि जातिहरुले गाईगोरुलाई आहाराकोरुपमा प्रयोग गर्छन् । यो कोणबाट हेर्दा नेपालमा पनि गाई खाने र नखाने दुईखाले हिन्दुहरु देखिन्छन् । नखानेको कुरालाई जबरजस्ति लाद्न संविधानले पनि रोकेको छ । एउटाको आस्था अर्कोलाई लाद्न मिल्दैन ।
यसलाई मानवअधिकारको कोणबाट हेर्दा नेपालले अनुमोदन गरेका सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि बिरुद्ध छ । राज्यले यो महासन्धि विसं २०२९ साल अर्थात पञ्चायत कालमै अनुमोदन गरेको छ । त्यसको धारा १ मा कसैलाई संस्कृतिको आधारमा विभेद गर्ने, संस्कृतिको आधारमा प्रताडित गरियो वा उसलाई राज्य आफैले कानुनी कार्वाही गर्यो भने त्यो नश्लीय विभेद हो । भनिएकोछ । त्यो नश्लीय विभेद बढ्दै गयो भने सांस्कृतिक संहारसम्म पुग्न सक्ने हुन्छ । मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि जसले गाईगोरुलाई पुज्नेगरि आस्था राख्दैन उनीहरुलाई तिमीहरुले जबरजस्ति यो पूज वा मान भनेर त्यसको आधारमा अपराधी करार गर्न मिल्दैन । मानवअधिकारको कोणबाट यो बिल्कुल मिल्दैन ।
– जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि, नेपालको संविधान, सामाजिक वा सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरु राज्यलाई थाहा भएरपनि गोरु मारेको अभियोगमा पक्राउ पर्नेहरु कुन कानुन अन्तर्गत पक्राउ परिरहेका छन् ?
पहिलाको मुलुकी ऐनमा १२ वर्ष सजाय गर्ने व्यवस्था थियो । दस वर्षभन्दा बढी सजाय गरिन्छ भने त्यसलाई हामी कानुनी भाषामा संगिन अपराध वा गम्भिर फौज्दारी अपराध भन्छौ । पहिले यसखाले अपराधलाई पञ्चखत भनिन्थ्यो । पञ्चखतमा अपराधमा गोवधलाई हिन्दुको आधारमा राखियो । त्यही आधारमा १२ वर्षको सजाय थियो । पछिल्लो समय यसको बारेमा ठुलो विरोध भयो ।
यसलाई मानवअधिकारको पक्षबाट हेरियो, आर्थिक पक्षबाट हेरियो । जब नयाँ मुलुकी ऐन अपराध संहिता ल्याइयो, त्यसमा पशुपंक्षीको महल राखेर तीन वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसको अर्थ के हो भने अब यो संगिन अपराध भएन । अदालतले अब के गर्छ भने एकदिन पनि थुन्न सक्छ, परिस्थिति हेरेर त्यसलाई नथुन्न पनि सक्छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि कसलाई कार्बाही गर्ने भन्ने कुरा मेरो व्याख्या अनुसार हो भने जो हिन्दु, हो, जसले गाईलाई पूजा नगरि हुँदैन, जसले मर्ने बेलामा वैतरणी तर्नु पर्यो भने गाईको पुच्छर समाउनु पर्छ, गौदान गर्नुपर्छ । त्यस्तोले मार्यो भने कार्बाही गर्नुपर्छ किनकि त्यो उनीहरुको आस्था हो । जसको संस्कृति गोवध गर्ने छ त्यो त नेपाल बन्नुभन्दा अगाडिदेखि चलिआएको प्रचलन हो । त्यस्तालाई यो कानुन लगाउनु हुदैंन ।
अर्को कुरा कसैलाई उत्तेजित गर्नकोलागि, कसैको आस्थामाथि चोट पुर्याउनकोलागि वा सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरि गोवध गरियो भने त्यो अपराधको कुरा हो । तर, त्यस्तो गरेको रहेनछ भने सामान्य तारेखमा छोडदिन सक्ने अहिलेको परिस्थिति छ । हिजो गोवधलाई मानिस मारे सरहको मानिन्थ्यो अब यो समान्य कानुनमा झरेकोछ ।
मैले भर्खरै एउटा कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ । त्यो कार्यक्रम पशुपालन र चरनखर्क सम्बन्धि थियो । काठमाडौंकै एउटा गाईपालक कृषकले कानुनको बारेमा रोचक कुरा गरे। उनको भनाईमा काठमाडौभित्र बाहिरबाट जति पनि गाईगोरु ल्याउन मिल्छ तर यहाँबाट बाहिर धपाउन मिल्दैन । अब यहाँ खर्क पनि छैन चरण पनि छैन । हामीले जुन गाई पाल्छौं, निश्चित समयपछि दूध दिन छाड्छ । त्यसलाई पालिराख्न हामीलाई आर्थिकरुपले घाटा लाग्छ । त्यसकारण हामीले गाईलाई चारभञ्ज्याङ्ग कटाउन पाउनु पर्यो नि । यसो गर्दा राज्यले हामीलाई किन कार्वाही गर्छ रु चार भञ्ज्याङ्ग कटेपछि त्यसलाई कसैले जोत्छ वा कुनै न कुनैरुपमा व्यवस्थित गर्छ । यहाँ बिजोग भएर सडकमा छाड्यो भने हामीलाई कार्बाही गरिन्छ । सडक दुर्घटना हुन्छ । त्यसरी बिजोग हुनुभन्दा आर्थिक हिसाबबाट हेर्दा पनि हुन्छ भन्ने उनको तर्क मलाई राम्रो लाग्यो ।
अहिले विस्तारै मानिसहरु हिन्दुअतिवादको चङ्गुलबाट मुक्त हुँदै जाँदैछन् । अर्कोचाहिँ हिन्दु अतिवादको कुरालाई बढाएर आफ्नो राजनैतिक रोटी सेक्न अगाडि बढिरहेका छन् । यो अतिवादबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ । कतिपय केसहरुमा गोवध गर्नेलाई कार्वाही नगरि छाडिदिएका छन्, त्यस्तो कुरालाई छोडिदियो भनेर अतिरञ्जित गरेर फेसबुकतिर लेख्नाले पनि समस्या उत्पन्न गराउँछ कि भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।
– राज्यको कानुनलाई उपयोग गरेर दुःख दिने एउटा पक्ष, त्यसलाई राजनीति इस्यु बनाएर हिन्दु अतिवादविरुद्ध अर्को अतिवादी नारा लगाउने वा देखाइदेखाइ गोवध गर्ने गतिविधि पनि त नराम्रो होला नि त ?
राज्यले चौपायाको महल राखेर मान्छेलाई चौपायाभन्दा तल राख्ने कानुनी अर्थ लाग्ने गरि जुन काम गर्यो वा जस्तोखाले कानुनी व्यवस्था छ । पहिला पञ्चायतकालले यस्तो व्यवस्था गर्यो । अहिले पनि सो व्यवस्थाअनुसार नै अपराध मानेको हुनाले गाईगोरुको मासु खाने मान्छेकोभन्दा गाईगोरुको कानुनी हैसियत माथि देखिन्छ । यो बिल्कुल गलत कुरा हो । यो गलत कुरालाई गलत हो भन्नकोलागि पनि सही तरिका प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । तपाईंले भनेजस्तो समाजिक सञ्जालतिर देखाउँदै अतिरञ्जित गर्ने गतिविधिहरु गर्नु पनि हुँदैन । राज्यले अन्याय गरेकै हो । राज्यले अन्याय गरेको भन्दैमा हामीलेपनि अन्याय नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि न्याय हुँदैन ।
आस्थाको कुरा भावनात्मक हुने भएकोले गलत शैलीले द्वन्द्व अगाडि बढ्न सक्छ । एउटा कुरा के रियलाइज गर्नुपर्छ भने अहिले मान्छे कानुन बुझ्दैछन्, मानवअधिकार बुभ्mदैछन् वा मानिसहरु शिक्षित हुँदैछन्, उनीहरुले विस्तारै यस्ताखाले कानुन राख्नु हुँदैन भन्नेमा पुगिसकेकाछन् ।
तर एकखालका अतिवादीहरु जो राज्यभित्र छन् र राज्य बाहिर पनि छन्, तिनले आफ्नो स्वार्थका निम्ति यस्ता कानुन बचाईराख्न चाहन्छन् । कानुन बनाउने मान्छेहरु पनि त्यसभित्र होलान्, उनीहरुको स्वार्थले पनि काम गरिरहेको होला । ढिलोचाँडो नेपालमा पनि भारतमा जस्तो गोवध खुल्ला हुनेछ । हामी खानेकुरामा झगडा गरेर बसिरहनु उचित हुन्न । सरकारले यो कुरा बुझेर तीन वर्षको जुन प्रावधान छ, त्यसलाई हटायो भने यो मुद्दा नै मुद्दा नरहन सक्दछ । यसोगर्दा सबैलाई न्याय हुन्छ ।
– तपाईँले भनेजस्तै भयो भने दुवै अतिवाद आफै मत्थर होलान् त ?
मलाई के लाग्छ भने अतिवाद भन्ने कुरा राज्यले जब सुरुवात गर्छ, आतङ्कवाद जन्मिन्छ कि जन्माइन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । समाचार बन्छन् कि बनाइन्छन् भन्ने कुरा पनि छ । मान्छे कोही पनि अपराधी जन्मिन्छन् जस्तो लाग्दैन । तर केहि मान्छे अहिलेपनि मान्छे जन्मदैँ शुद्र भएर जन्मछन् भनेर अनावश्यक तर्क गर्छन् । हिन्दु अतिवादीहरुले यो तर्क अगाडि ल्याएर हिन्दु धर्मलाई राजनीतिक रोटी सेक्ने काम गरिरहेकाछन् । म मानवअधिकारमा विश्वास गर्ने भएकोले न मान्छे जन्मदैमा शुद्र भएर जन्मन्छ न कुनै अरु ग्लोरीफाइ भएर जन्मन्छ । मान्छे मान्छे नै भएर जन्मन्छ ।
– तपाईँको विचारजस्तै राज्यको कानुन बनाउनेहरुको विचार पनि हुनु पर्यो नी,होईन र ?
यो राज्य सबैको हो । सरकारमा बसेकाहरुले बोलेको कुरामात्रै राज्यको कुरा हुने बाहिर बसेकाहरुले बोलेको कुरा जहिले पनि वागी हुने भन्ने जुन सोच छ त्यस्तो सोंचबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ । त्यसो नगरिए दुईटा राज्य हुन्छ । यस्तै कुराले पछि गएर गाई खानेको राज्य एउटा गाई नखानेको अर्को राज्यको स्थितिसम्म पुग्यो भने अप्ठ्यारो हुनजान्छ । अहिले हिन्दु धर्मलाई जनमतमा लैजानुस् भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसो हो भने डाक्टर सीके राउतले मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र राख्ने कि के गर्ने भनेर जनमतमा जानु पर्यो भनेको छ । यी दुईटाको तात्विक सम्बन्ध के छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक बर्ष अघि गरिएको लाईभ भिडीयो यहाँ छ:
Tags: Free Press Nepalmuluki ainshankar limbusharkar limbu interviewफ्री प्रेस नेपाल